အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မန္တလေးမြို့တော်ရဲ့ စည်ပင်သာယာဋ္ဌာနအကြောင်း (တိုင်ကြားစာ) ~ ဒီမိုဝေယံ
အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ မန္တလေးမြို့တော်ရဲ့ စည်ပင်သာယာဋ္ဌာနအကြောင်း (တိုင်ကြားစာ)
အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Clean Government လို့ကြွေးကျော်ပြီး စတင်ဆောင်ရွက်နေတာ အချိန်ကာလ တစ်ခုကြာခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့က မြို့တော်စည်ပင်မှာတော့ မ clean government လို့တင်ပြပါတော့မည် ။
1. မြေယာဋ္ဌာနမှာ ပေးရတဲ့ တရားမ၀င်ကြေးများကို မြို့တော်ဝန်ထံ တိုင်ကြားပါတယ်။ ဒီတော့ မြေယာဌာနမှူးက ဒီဌာနနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ရှေ့နေ၊ အကျိုးဆောင်၊ မြေပုံကူး၊ နာမည်ပြောင်း စတဲ့လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုများကို ခေါ်ပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့အစည်းကို လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ပတ်သတ်လို့ ငွေတစ်ပြားမှ မပေးရကြောင်းကို သက်သေ ထူခိုင်းပါတော့တယ်။ အဲဒီမှာ မပေးရပါဘူးလို့ ဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့ လုပ်ငန်း ဆက်လုပ်ရာမှာ ထုံးစံအတိုင်း ကြေးတစ်ခုနှင့် အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးပြီး၊ ပေးရပါတယ်လို့ ဆိုတဲ့သူတွေကိုတော့ ဘာလာလုပ်လုပ် အဆင်မပြေအောင် တစ်ဌာနလုံးက ဂျစ်ကြပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီဌာနမှူးကလဲ မြို့တော်ဝန်ကြီးနှင့် အဆင်မပြေတဲ့ သွားလေသူ တိုင်းမှူး တစ်ဦးရဲ့ သူငယ်ချင်းကို အလုပ်ကဖြုတ်ပြီး တက်တာက မြို့တော်ဝန် တပည့်အရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
2. မြို့တော်ဝန်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့လုပ်တဲ့ ကားကြီးကွင်းလမ်း တည်ဆောက်ရေးမှာပါ၊ အဲဒီမှာရှိတဲ့ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများရဲ့ 80% ကို မြို့တော်ဝန်ကြီးရဲ့ ယောက်ဖဖြစ်သူ ကိုဖြိုးနဲ့ မိုးကိုဇော်တို့ရဲ့ ကုမ္ပဏီကို ပေးပြီး၊ ကျန်တဲ့ 20 % ကိုတော့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ မြို့တော်ဝန်ကြီးရဲ့ အိမ်များ၊ ခြံများကို အလကား ဆောက်ပေးရတဲ့ မင်း ဆောက်လုပ်ရေးကိုပဲ ပေးပြီးတော့၊ မန္တလေးအခြေစိုက် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီများကိုတော့ ကန်ထရိုက်လိုင်စင် ကြေးများယူပြီး တစ်ခုမှ ချမပေးခဲ့ပါဘူး၊ 20%ကို ဆောက်လုပ်ခွင့်ရသော ရန်ကုန်အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ များမှာ၊ ကန်ထရိုက်လိုင်စင်မရှိ၊ အခုမှ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းထဲ ၀င်ရောက်လာပြီး ၀န်ကြီးနှင့် နီးစပ်မှု၊ မြို့တော်ဝန်နှင့် ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းများကိုသာ ချထားပေးခဲ့တာပါပဲ။
3. အဲဒီကားကြီးဝင်း ပြီးခါနီးကျတော့လဲ အမှန်တကယ် ကားဂိတ်ဖွင့်မည့်သူ၊ ဈေးဆိုင်ဖွင့်မည့်သူများကို ဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှ ဘယ်ဈေး ဖြင့် ဘယ်လိုရောင်းချမည်ဟု မကြေငြာပဲ၊ မြို့တော်ဝန်နှင့် ကော်မတီဝင် များသာ နာမည်အမျိုးမျိုး တပ်ပြီးယူဆောင်ကာ တစ်ဆင့် အမြတ်တင်ဈေးဖြင့် ပြန်ရောင်းချတာကို တွေ့ရပါတယ်။
4. စီးပွားရေး သမားများသာ လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်တတ်တာမဟုတ်ပဲ မြို့တော်ဝန်နှင့် ကြာပြီဖြစ်သော ကော်မတီဝင်များမှာ ကိုယ်ကျိုးလောဘဖြင့် စီမံခန့်ခွဲလျှက်ရှိပြီး၊ စည်ပင်သာယာနှင့် ပတ်သက်သော ရေ၊ မီး၊ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်၊ ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ယာဉ်စက် ယန္တယားများမှ မီးသဂြိုလ်စက်အဆုံး ၎င်းတို့တစ်သိုက်သာ လက်ဝါးရိုက်ပြီး ပြည်သူလူထု၏ ဘဏ္ဍာငွေများကို နည်းအမျိုးမျိုး သုံးပြီး လက်ဝါးကြီးအုပ် အလွဲသုံးစားလုပ်လျက်ရှိပါသည်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုစဉ်းစားစရာကတော့ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး အစည်းအရုံးဟာ မိမိဘာသာ စီမံခန့်ခွဲ၊ မိမိဘာသာ operation လုပ်၊ မိမိဘာသာ စစ်ဆေးဆိုတော့ စီမံတာ၊ လုပ်ဆောင်တာ၊ စစ်ဆေးတာက တစ်ဦးတစ်ဖွဲ့ တည်းဆိုတော့ မိမိအဖို့ပဲ ဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာ။
နိုင်ငံတော် စီမံခန့်ခွဲမှု စံနစ်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပြီး သမ္မတကြီး ဦးဆောင်မှုဖြင့် clean government လုပ်နေရာမှာ၊ မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်ကြီးလိုပဲ စိမ်းလန်း ရှင်သန်စေချင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် ပြည်သူကိုအသိမပေး၊ မကြေငြာပဲ ၄င်းတို့ဘာသာ လက်သိပ်ထိုးလုပ်တဲ့ အကျင့်ကို အရင်ဆုံး ပြင်ဆင်ရမည်ဟု အကြံပေးလိုပါတယ်။ တိုင်းဒေသ၀န်ကြီးချုပ်ကိုလဲ မန္တလေးမြို့တော်ရဲ့ စည်ပင်သာယာငှာန အခြေအနေမှန်ဖြစ်သော စည်းစံနစ်ဖြင့် မအုပ်ချုပ်ပဲ တစ်ဦးတယောက်ထဲရဲ့ အတ္တဖြင့် အုပ်ချုပ်နေသည်ကို သိစေလိုပါသည်။ မြို့နေလူထူကလဲ အကျင့်ပျက် ချစားသော ၀န်ထမ်းများကို ၀ိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက် ပေးကြဖို့ကို တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ DVBနှင့် သတင်းမီဒီယာများမှ တစ်ဆင့် တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။